Puntiland Oo Howlgalo Dad Lagu Soo Qabtay Ka Fulisay Gobalka Bari – Al-Hurriyah
Ciidamada Ammaanka maamulka puntiland ayaa saacadihii aanu ka soo gudubnay waxa ay howlgalo lagu xqiijinayo amniga magaalada boosaaso ka sameeyeen xaafado ka tirsan magaaladaasi
Saraakiisha hor keceysay howlgalada ayaa sheegay in howgalada ay ahaayeen kuwo lagu baadi goobayay xubno ka tirsan dagaaliyahanada kooxda daacish iyo xarakada al-shabaab oo ciidamadu ay sheegeen in ay ka war heleen in magaalada ay ku sugan yihiin .
Ciidanka sida gaarka ah u tababaran PSF puntilan ayaa labadii habeen ee la soo dhaafay magaalada boosaaso waxa ay ka wadeen holgalo ay shegeen in ay ku xaqiijinayaan amniga magaalada, si looga hortago falal lidi ku ah nabadgalyada oo ka dhaca magaaladaasi .
Waxa lagu sheegay war ka soobaxay saraakiisha ciidanka in howlagaladaasi looga goleeyahay sidii looga cortagi lahaa falal argagixiso oo ka dhaca degaanada maamulka puntiland sida hadalka ay u dhigeen .
Sidoo kale Warka Ciidamada Ammaanka Puntland ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Ammaanka ay gacanta ku dhigeen Tiro dad ah oo lagu tuhmayo inay ka tirsan yihin Al-Shabaab iyo Daacish oo mararka qaar weeraro iyo dilal ka fuliya Boosaaso.
Sharaakiisha amniga puntiland ayaa shacabka magaalada boosaaso faray in ay la shaqeyaan ciidanka si looga hortago amni daro ka dhacada magaalada Boosaaso ee xarunta gobalka Bari .
Deegaano iyo degmooyin dhaca gobalka bari ee maamulka puntiland waxaa inta badan ka dhaca dilal iyo weeraro kuwaasi oo nitabadan mas,uuliyadooda ay sheegtaan xarakada Al-shabaab iyo daacista soomaaliya ka dagaalanta .
Ugu dambeytii ciidanka ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan howlgalada lagu xaqiijinayo amniga ee ka socada gobalka Bari.
-Wasaaradda caafimaadka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa xaqiijisay in ay soo kordheen 49…